Nanao ny Tsara Foana i Samoela, Ilay ao Amin’ny Baiboly
Ny Tilikambo Fiambenana | 2008-08-01
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Boligara Cebuano Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Groenlandey Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Letonianina Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Sepedi Serba Sesotho (Lesotho) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Tagalog Tailandey Tiorka Tiv Tseky Tsonga Vietnamianina Xhosa Zoloa
EFA nahita olona nanao ratsy ve ianao?... * Efa nahita izany i Samoela, izay niaina maherin’ny 3 000 taona lasa izay. Nipetraka tao amin’ny toerana tsy noeritreretina hisian’ny mpanao ratsy izy. Tao amin’ny tranolain’Andriamanitra na toeram-pivavahana aminy, tao amin’ny tanànan’i Silo izany. Andeha hojerentsika ny nahatonga an’i Samoela hipetraka tao.
Naniry mafy hanan-janaka i Hana, renin’i Samoela, talohan’ny niterahany azy. Nolazainy tamin’Andriamanitra tamin’ny vavaka izany, rehefa nitsidika ny tranolay masina izy. Nivavaka tamin-kafanam-po izy, ka nihetsiketsika ny molony. Noheverin’i Ely mpisoronabe fa mamo izy. Rehefa fantatr’i Ely anefa fa ory mafy i Hana fa tsy mamo, dia nitso-drano azy izy hoe: “Homen’Andriamanitry ny Isiraely anao anie izay nangatahinao.”—1 Samoela 1:17.
Niteraka an’i Samoela i Hana, tatỳ aoriana. Faly be izy ka nilaza tamin’i Elkana vadiny hoe: ‘Raha vao misara-nono i Samoela, dia hoentiko any amin’ny tranolay, mba hanompo an’Andriamanitra any.’ Izany tokoa no nataony, rehefa efatra na dimy taona teo ho eo i Samoela.
Efa antitra i Ely, ary tsy nanompo tsara an’i Jehovah i Hofinia sy Finehasa zanany lahy. Nijangajanga tamin’ireo vehivavy tonga tao amin’ny tranolay masina mihitsy aza izy ireo! Araka ny hevitrao, inona no tokony ho nataon’ny dadany rehefa nahita izany?... Tokony ho nofaiziny izy ireo, fa tsy navelany hanao ratsy toy izany.
Nipetraka tao amin’ny tranolay masina i Samoela kely, ary azo inoana fa fantany ny toetra ratsin’ireo zanakalahin’i Ely. Nanao ratsy toa azy ireo koa ve i Samoela?... Tsia, nanao ny tsara foana izy, araka izay nampianarin’ny ray aman-dreniny azy. Tsy nahagaga anefa raha tezitra tamin’i Ely i Jehovah. Naniraka mpaminany mihitsy izy hilaza tamin’i Ely fa hosaziny ny ankohonany, indrindra fa ireo zanany lahy ratsy toetra.—1 Samoela 2:22-36.
Nanompo an’i Jehovah niaraka tamin’i Ely tao amin’ny tranolay foana i Samoela. Indray alina, raha mbola natory i Samoela, dia nisy feo niantso azy. Nihazakazaka tany amin’i Ely izy, nefa nilaza i Ely fa tsy niantso azy. Nisy niantso indray izy, ka mbola nihazakazaka tany amin’i Ely. Rehefa nisy niantso fanintelony i Samoela, dia nasain’i Ely niteny hoe: “Mitenena, Jehovah ô; fa mihaino ny mpanomponao.” Rehefa nilaza izany izy, dia niresaka taminy i Jehovah. Fantatrao ve hoe inona no nolazainy tamin’i Samoela?...
Naverin’Andriamanitra nolazaina tamin’i Samoela ny fikasany hanasazy ny ankohonan’i Ely. Tsy sahy nilaza tamin’i Ely ny tenin’i Jehovah i Samoela nony maraina. Niangavy azy anefa i Ely hoe: “Masìna hianao, aza afeninao ahy.” Nambaran’i Samoela tamin’i Ely àry, tamin’ny farany, izay rehetra nolazain’i Jehovah fa hataony, tsy misy hafa amin’izay efa nolazain’ilay mpaminany. Namaly i Ely hoe: “Aoka Izy [Jehovah] hanao izay sitraky ny fony.” Novonoina i Hofinia sy Finehasa tamin’ny farany, ary maty koa i Ely.—1 Samoela 3:1-18.
Nandritra izany fotoana izany, dia “nitombo Samoela, sady nomba azy Jehovah.” Nety ho efa teo anelanelan’ny faha-13 sy ny faha-19 taonany izy. Fotoana miavaka eo amin’ny fiainan’ny tanora izany. Araka ny hevitrao, mora tamin’i Samoela ve ny nanao ny tsara foana, nefa ny hafa nanao ratsy?... Tsy mora izany, nefa tsy nivadika tamin’i Jehovah mandra-pahafatiny i Samoela.—1 Samoela 3:19-21.
Ary ianao? Ho toa an’i Samoela foana ve ianao rehefa lehibe? Hanao ny tsara foana ve ianao? Hankatò ny fampianaran’ny Baiboly foana ve ianao, ary hanaraka izay nampianarin’ny ray aman-dreninao anao? Hampifaly an’i Jehovah sy ny ray aman-dreninao ianao, raha manao izany.
Inona no nahatonga an’i Samoela hanompo tao amin’ny tranolain’i Jehovah?
Inona no zava-dratsy hitan’i Samoela tao?
Inona no lesona ho an’ny tanora, avy amin’ny tantaran’i Samoela?